413 Days, Full time , Food & Beverages / Catering
•	Possess leadership quality and initiative. •	Able to communicate ideas and thoughts across to others. •	Ability to build Teamwork community. •	Excellent mechanical and operational aptitude.
•	သွက်လတ်တက်ကြွ၍ admin လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Mandalay မြို့လေးတွင်း ဆိုင်ကယ်ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနိုင်ရမည်။ •	ဆိုင ...
Head Chef (Executive Chef)
•	Team ကို ဦးဆောင်နိုင်ရမည်။ •	ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးရှိရမည်။ •	လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု တာဝန်ယူမှုအပေါ်မူတည်၍ လုပ်ခလစာခံစားခွင့်ရှိသည်။
Job Purpose: To make sure to fulfill customer’s satisfaction and to keep maintain the standard of EASY RAY branded taste and improvement of it. Responsibilities •	အသစ်ဝင်သော Cashierများအား EASY RAY မှသတ်မှတ်ထားသော Cashier JD နှင့် အခြားသိသင့်သိထိုက်သောလုပ်ငန်းစဉ်များအား သင်ကြားပေးရမည်။ •	Cashierများ၏ လစဉ် Assign Plan များ ...